Kodzero-dzevanhu, 21 Chikunguru 2019
Svondo 21 Chikunguru 2019
Hurumende Yoita Misangano neEconet neMamwe Makambani
Gurukota rezvemhando dzemoto VaFortune Chasi vanoti hurumende svondo rino ichaita misangano nemakambani enharembozha mushure mekunge nezuro kwaita dambudziko rekusashanda kwenharembozha dzeEconet.
VaChamisa Vanoti Vari Kunetsekana neMamiriro Aita Zvinhu muNyika
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC VaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi vachinzwa pfungwa dzevanhu asi zvavari kunzwa zviri kuratidza kuti munyika mapindwa naPongwe.
Sachigaro weWomen’s Coalition of Zimbabwe, Amai Ronika Mumbire, vati vari kushushikana zvikuru nenyaya dziri kutaurwa pamusoro paVaMagaya uye panofanira kuumbwa komisheni ichaongorora nyaya idzi kuitira kuti chokwadi chibude pachena uye kana pakaparwa mhosva, dzotongwa
Chikwata chehurumende chiri kuongorora bata murefu bata mupfupi iri kuitika mukanzuru yeBulawao change chiri kutarisirwa mudhorobha iri neChina kuti chitanga basa nemusi weChishanu.
Hurumende Inoti Iri Kuongorora Zvakaitika muKanzuru yeBulawayo
Meya veguta reBulawayo, VaSolomon Mguni, vanoti bazi rezvekutongwa kwematunhu ravazivisa kuti richatuma chikwata chevanhu kuBulawayo kunoongorora zvakaitika mukanzuru yeBulawayo, zvinosanganisira kumiswa basa kwakange kwaitwa munyori weguta, VaChristopher Dube.
Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee, ZimVac, rinoti vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kumaruwa vatarisana nenzara kutanga muna Ndira kusvika Chikunguru gore rinouya.
Munyori mukuru muZCTU, VaJaphet Moyo, vaudza Studio7 kuti vakatambira tsamba nezuro yaive nemabara epfuti tsamba iyi ichivatyisidzira nerufu kana vakaenderera mberi nehurongwa hwekuronga kuratidzira munyika yose svondo rinouya.
Hurumende yeZimbabwe inonzi yakasvitsa zviri pamutemo neChipiri, nyunyuto yayo pamusoro pemabatirwo anonzi akaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaSibusiso Moyo, nevanhu vaitaridzira kuLondon svondo rapera.